TTSD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ အထွေထွေမန်နေဂျာသို့သွားပါ RayHaber
[10 / 12 / 2019] မြို့တော်ဝန်ယူစီသည် Sapanca Cable Car Project ကိုပြောကြားခဲ့သည်	54 Sakarya
[10 / 12 / 2019] ESHOT နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံစွမ်းဆောင်ရည်သည်5Megavata သို့မြင့်တက်လာလိမ့်မည်	35 Izmir
[10 / 12 / 2019] Konya မြေအောက်ရထား4ကိုယခုနှစ်အတွင်းအပြီးတည်ဆောက်မည်ဖြစ်သည်	42 Konya
[10 / 12 / 2019] သင်၏ပင်လယ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ 11 ကိုအစ္စတန်ဘူလ်တွင်ဒီဇင်ဘာလတွင်ကျင်းပလိမ့်မည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီTTSD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ အထွေထွေမန်နေဂျာသို့သွားပါ
13 / 11 / 2019 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
ယေဘုယျ mudurune ခရီးစဉ်အဖြစ် btsden tcdd သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
TTSD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ အထွေထွေမန်နေဂျာသို့သွားပါ။ ယူနိုက်တက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ထမ်းများသမဂ္ဂ (BTS) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များနှင့်ဌာနခွဲဥက္ကidents္ဌများနှင့် TCDD Taşımacılık A.Ş. အထွေထွေမန်နေဂျာ Kamuran Yazıcıသည်သူ၏ရုံးခန်းသို့သွားရောက်ခဲ့သည်။
အင်တာဗျူး; သမ္မတ Hasan Bektaş၊ အထွေထွေဥပဒေTİSနှင့်လူ့အခွင့်အရေးအတွင်းရေးမှူး Rzaza Ercivan, Ankara ဌာနခွဲဥက္ကဌ mailsmail Özdemir, Istanbul 1 ဌာနခွဲဥက္ကPresident္ဌSadık Short, Adana ဌာနခွဲဥက္ကPresident္ဌTonguçÖzkanနှင့်Diyarbakırဌာနခွဲဥက္ကPresident္ဌ Nusret Basmacıတို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူ၏တာ ၀ န်များကြောင့်ကောင်းမွန်သောဆန္ဒများကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး၊ အလုပ်ခွင်များတွင်ပြandနာများကြုံတွေ့ရပြီးထိုပြopinionsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ထင်မြင်ချက်များကိုဖလှယ်ခဲ့သည်။
အင်တာဗျူးတွင်ဖော်ပြသောပြနာများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ "26 အောက်တိုဘာ 2019 တွင် TCDD A.Şသည် Promot Promotion ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အောက်ပါနေ့ရက်များတွင်ခွဲတမ်းအောင်မြင်သူများကိုအင်တာဗျူးဖြေဆိုရလိမ့်မည်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များအတွင်းကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂရွေးချယ်မှုတွင်ထင်မြင်ချက်နှင့်ဖိအားများစွာရှိခဲ့သည်။ အလွန်ရှင်းလင်းစွာလူသိများသည်။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးကိုပျက်ပြားစေရုံသာမကအရည်အချင်းပြည့် ၀ သော ၀ န်ထမ်းများရွေးချယ်ခြင်းကိုလည်းအရိပ်အမြွက်ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည်ပြည်နယ်များတွင်အထူးသဖြင့်ထိရောက်သည်။ ကောလာဟလများပင်လျှင်အဖွဲ့အစည်းသည်အများပြည်သူအမြင်တွင်ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေပြီးစာမေးပွဲများတွင်ချွေးများကျနေသော ၀ န်ထမ်းများအကြားငြိမ်သက်အေးချမ်းမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောမေးခွန်းများနှင့်အင်တာဗျူးစာမေးပွဲများတွင်ဖြစ်နိုင်သောထင်မြင်ချက်များကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် 2018 ရှိ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှု၏ဖွဲ့စည်းပုံတွင်ခေါင်းစဉ်နှင့်ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုတူညီသောနှုန်းထားဖြင့်အင်တာဗျူးတွင်ဖြေဆိုခွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်အောင်မြင်နိုင်သည်။
ဥပဒေကို 6461 ဖြင့်ရေတွက်ပြီးပါကထိုဌာန၌အလုပ်လုပ်သော TTG များသည် TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနနှင့် TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc. ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုလုံးကိုဒီကိစ္စမှာလက်တွေ့မှာပြaနာအများကြီးဖန်တီးလိမ့်မယ်လို့သတိပေးခဲ့တယ်။ သို့သော်ပြtheနာများသည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ထက်ပိုပြီးကြုံတွေ့ရကြောင်းလူသိများသည်။ TCDD နှင့် TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအောက်တွင်စုစည်းထားသည့် TTG များအားလုံးမှန်ကန်တဲ့အဆင့်ဖြစ်လိမ့်မည်Taşımacılık A.Ş.
စက်လုပ်သမားခေါင်းစဉ်သည်အထူးဂရုပြုရန်လိုသည့်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းဤအလုပ်အကိုင်၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကျင့်သုံးမှုများနှင့်အတူအကြီးအကျယ်ယိုယွင်းပျက်စီးနေသည်။ အောက်ပါအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်အရေးကြီးသောခေါင်းစဉ်နှစ်ခုကိုရှင်းပြနိုင်သည်။ ယခင်အလုပ်တွင်ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသည့်လက်ထောက်စက်ယန္တရားကြီး၏ခေါင်းစဉ်သည်အချိန်ကာလနှင့်လေ့ကျင့်မှုအပြီးတွင် Machinist ဘွဲ့ရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံအချို့ရရှိခဲ့ပြီး၊ အလုပ်ခွင်ကိုပိုမိုစည်းကမ်းဖြစ်စေခဲ့သည်။ Assistant Machinist ၏ခေါင်းစဉ်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အလုပ်အစတွင်တိုက်ရိုက်စက်ယန္တရားစက်၏ခေါင်းစဉ်ကိုပေးခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ယခင်ကြီးပြင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖျက်စီးခဲ့ပြီး၊ အခန်းအတွင်းရှိအဆင့်ဆင့်ကိုဖယ်ရှားပြီးရှုပ်ထွေးစေသည်။
စက်ပြင်အလုပ်၏အလုပ်ခန့်အပ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့တည်ထောင်ပြီးကတည်းကအစိုးရ ၀ န်ထမ်း (657 နှင့် 399 KHK) ၏အခြေအနေအောက်တွင်ရှိသော်လည်း ၀ ယ်ယူမှုအသစ်များအား 10 အလုပ်သမားဥပဒေအရလွန်ခဲ့သည့် 4857 နှစ်မှစ၍ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လုပ်အားခ၊ လျော်ကြေးနှင့်စည်းကမ်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုနှစ်ခုကွဲပြားသည့်အခြေအနေနှင့်အလုပ်ချိန်၊ လုပ်ခ၊ လျော်ကြေးနှင့်စည်းကမ်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့်လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုတို့တွင်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ အလုပ်လျှောက်လွှာကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်ဤလျှောက်လွှာအားဖယ်ရှားခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
မကြာသေးမီကအတွင်းခန့်အပ်မှုများတွင်အရည်အချင်းမရှိခြင်းနှင့်မမှန်မကန်မှုများရှိခဲ့သည်။ အရည်အချင်းကိုလျစ်လျူရှုခြင်းနှင့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုလျစ်လျူရှုခြင်းအားဖြင့်ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်များအပေါ်ခန့်အပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောခြောက်လအတွင်း hule မှပြုလုပ်သောချိန်းဆိုမှုများအားစစ်ဆေးပြီးချက်ချင်းပယ်ဖျက်သင့်သည်။
TCDD Taşımacılık A.Ş. တွင်အီလက်ထရောနစ်ငွေလွှဲပြောင်းခြင်းကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာမဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်ထောင်စုနှင့်ကော်ပိုရိတ်အာဏာပိုင်များနှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းမှုများ၏ရလဒ်အဖြစ်ခွင့်ပြုထားသောဝန်ထမ်းများလွှဲပြောင်းခြင်းကိုအကြီးအကျယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သော်လည်း2(တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကြိမ်) အားလုံးအား ၀ န်ထမ်းများအားဖွင့်လှစ်ခြင်းအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ရမည့်အတိုင်းအတာများအတွင်း၌လုပ်သင့်သည်။ ဒေသအပေါ်မူတည်။ Adana, Mainskenderun, Gaziantep, Konya ယာဉ်ပြုပြင်ခြင်းအလုပ်ခွင်တွင်စက်ယန္တရားသမားများရောက်ရှိခြင်းနှင့်ထွက်ခွာခြင်းအတွက်အသုံးပြုသော ၀ န်ဆောင်မှုယာဉ်များကိုယာဉ်မောင်းများမရှိခြင်းကြောင့်ပြproblemsနာများရှိပါသည်။
CBS ညှိနှိုင်းမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်အလုပ်သမားသမဂ္ဂများကိုလေ့လာသူများအနေဖြင့် 2020 / 2022 မြှင့်တင်ရေးအစည်းအဝေးများတွင်ပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်သည်။
TCDD Taşımacılık A.Ş. အထွေထွေ ...
DTD မှ TCDD Taşımacılık A.Ş. အထွေထွေမန်နေဂျာYazıcıသို့သွားရောက်ပါ
Atalay မှTürk-İşနှင့် Railway-İşဥက္ကဌ…
Cankes လည်ပတ်တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ၏ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေ
BTS, TCDD ပုဂ္ဂိုလ်
CER သည် TCDD Taşımacılık A.Ş. သို့လည်ပတ်သည်။
TCDD ၏ညွှန်ကြားချက်အရရထားမတော်တဆဖြစ်မှုတွင် YHT အင်ဂျင်နီယာများက…
TCDD နှင့် TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc. အထွေထွေမန်နေဂျာ
BTS ဖုန်းခေါ်ရန် TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာApaydın'lခဲ့သည်